Iska yaree Walaaca - Furayaasha ugu Wanaagsan ee Lagu Helo | Bezzia
Susana godoy | 12/09/2021 18:00 | Cilmi-nafsiga
Ma hubo sida loo yareeyo walaaca? Dabcan maahan wax aad u fudud in la fuliyo laakiin annaga ayay nagu xiran tahay in aan doorano taxane tallaabooyin ama furayaal ah oo naga caawiya xakameynta nolosheena iyo maskaxdeena. Sidaa darteed, waxaan kaaga tagnaa gacan weyn oo ay tahay inaad sida ugu dhaqsaha badan u dhaqan geliso.
Mararka qaarkood waxay u muuqataa si lama filaan ah nolosheena iyo tan waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin waaweyn ama argagax in aan sidoo kale yeelan karno marka ugu yar ee aan filayno. Markaa, ka hor intaanay dhammaan taasi dhicin, waa inaan hoos ugu dhaadhacnaa ganacsiga. Waxaa la joogaa waqtigii dhibaatada lagu weerari lahaa sida ugu fiican ee aan naqaan.
1 Mar walba mudnaanta siiso noloshaada
2 Ha ka welwelin wax badan
3 Mar walba muuji shucuurtaada
4 Waqti qaado maalin kasta
5 Hel nasasho kugu filan si aad u yarayso walaaca
Mar walba mudnaanta siiso noloshaada
Waxaa jira waxyaabo aan la samayn karin maalin maalmaha ka dambeeya, sidaa darteed, waa inaan qaadnaa tallaabooyin yaryar laakiin badbaado leh. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa kan. Welwelku wuxuu soo baxaa markaan horeba uga dheregsannahay walaaca, marka aynaan mar dambe qaadan karin oo dareemayaashayadu dusha saaran yihiin. Sidaa darteed, waxaa mar walba wanaagsan in la joogsado oo la fikiro. Sababtoo ah saldhigga wax walba waa in mudnaanta la siiyo waxa run ahaantii muhiimka ah waana inaan fulinaa. Waxa aan ahayn, waa sugi karaa maxaa yeelay caafimaadkayaga ayaa ugu horreeya. Haddaba, aasaaska maalmaheennu wuxuu ku jiraa ururka.
Ha ka welwelin wax badan
Haddii aadan ku imaan waqtigii loogu talagalay si aad u fuliso wax kasta oo aad u malaynaysay, ha welwelin. Sababtoo ah dhammaanteen waxaan leenahay xad oo waa inaadan dhaafin haddii aanan hore u ogeyn waxa na sugaya. Waxaa fiican in si togan loo fikiro, maxaa yeelay haddii ay xal leedahay, maxaa faa’iido u leh in wax badan la walwalo? Oo haddii aadan haysan, markaa muhiim maahan Waa inaan u oggolaannaa fikradahaas taban inay qulqulaan maxaa yeelay haddii kale waxay ku degi doonaan madaxayaga waxayna aad uga sii adkaan doontaa inaan hore u soconno.
Mar walba muuji shucuurtaada
Ka tagista waxa aan dareemeyno daqiiqad kasta gudaha gudaheeda sidoo kale maahan wax wanaagsan. Sidaa darteed, bannaanka mar walba waa habboon tahay. Haddii aad awooddo, wax ka fiican ma aha qaraabadaada ama dadkaas gaarka ah ee aad noloshaada ku haysato. Haddii kale, waxba uma eka qof takhasus leh oo ku siin doona talada ugu fiican. Laakiin si uun ama si kale ayaad si fiican u dareemi doontaa haddii aad dibadda u soo saarto halkii aadan uga tagin gudaha. Xaqiiqdii waad hore u taqaanay, laakiin had iyo jeer ma fududa in lagu dhaqmo oo waan ognahay. Haddii ay kugu kacayso, marka hore isku day inaad qorto shucuurta waxaadna arki doontaa inay tahay tallaabada ugu horreysa ee lagu ladnaado.
Waqti qaado maalin kasta
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti badan laakiin waxa wanaagsan ayaa ah inaan had iyo jeer haysano dhowr daqiiqo nafteena. Iyaga dhexdooda waxaad ku samayn kartaa waxaad ugu jeceshahay, laga bilaabo ciyaarista isboortiga ilaa dhageysiga muusikada. Wax ku dareensiiya wanaag, ku nasiya, kuna siiya tamar kugu filan oo aad ku sii wadato. Sidaad arki karto, muhiim ma aha in la qaado tillaabooyin qalafsan, laakiin in maalin kasta la sameeyo dadaal yar si loo fuliyo wixii loo ballanqaaday. Wakhtiguna waa wax badan.
Hel nasasho kugu filan si aad u yarayso walaaca
Dabcan, dadka doonaya inay yareeyaan welwelka had iyo jeer ma laha hurdo fiican. Hurdo la'aanta ayaa laga yaabaa inay joogto waana qayb kale oo taban si welwelku u sii ahaado dhib. Marka, waa inaan dhisnaa caadooyin maalin kasta ah, kuwani waa inay ahaadaan kuwo lagu hayo jadwalka. Sababtoo ah markaas uun baa jidhku si aad u fiican ula qabsan doonaa. Laakiin haa, marka ay nagu adkaato inaan seexano, waa inaan ku dabaqnaa tillaabooyin dadka waayeelka ah sida inaan la cunin casho aad u badan, qubeys nasasho leh ka hor intaadan seexan ama aan damin dhammaan aaladaha. Waxaad arki doontaa sida sidan oo kale iyo wadarta tallaabooyinka oo dhan, aad u yareyn karto welwelka oo aad u baran lahayd inaad walwalkaaga dhinac iska dhigto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Furayaasha yareynta walaaca
Ukun la jarjaray oo baradho leh iyo zucchini oo leh caws